Rasoherina dia mpanjakavavy malagasy nanjaka tao amin'ny Fanjakan'i Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 1863, nahafatesan-dRadama II vadiny, hatramin'ny taona 1868. Teraka tamin'ny taona 1814 izy, ka Rabodozanakandriana izay nohafohezina amin'ny hoe Rabodo fotsiny no niantsoana azy talohan'ny naha mpanjaka azy, ary maty tamin'ny taona 1868. Nanambady an-dRainivoninahitriniony izy nefa nisarahany io ka Rainilaiarivony indray no lasa vadiny izay tena nitantana ny raharaham-panjakana. Nanao fifanarahana ara-barotra na ara-politika tamin'ny Frantsay sy ny Britanika ary ny Amerikana izy. Ranavalona II no nandimby azy rehefa maty izy tamin'ny taona 1868.
Taorian'ny fanandramam-panonganana dia nomen'ireo tandapa fahafahana manjaka i Rasoherina (1863-1868) vadin-dRadama, raha manaiky fizaram-pahefana amin'ny Praiminisitra izy. Izany fifanarahana ara-piarahamonina izany dia ho tanteraka amin'ny alalan'ny fanambadiana manana endrika politika. Nanaiky ny mpanjakavavy Rasoherina ka nanambady an'i Rainivoninahitriniony, ary taorian'ny fanonganana azy dia nanambady ny rahalahiny Rainilaiarivony (1864-1895), izay hanambady an-Ranavalona II (1868-1883) sy an-dRanavalona III (1883-1897).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Rasoherina&oldid=1002447"
Voaova farany tamin'ny 10 Martsa 2021 amin'ny 10:33 ity pejy ity.